Wondershare MobileTrans User Guide - Back Up Android ka PC
MobileTrans Guide: Back Up Android ka PC
Nzọụkwụ 2. Pịa "Ndabere ekwentị gị."
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị android ngwaọrụ gị na kọmputa na iji eriri cables. Gbaa mbọ hụ na Wondershare ike ịmata ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 4. Lelee faịlụ na ị chọrọ ndabere.
Nzọụkwụ 5. Pịa "Malite Copy" na-amalite nkwado ndabere na mpaghara usoro. Na-ekwentị ejikọrọ site dum usoro.
Ọzọ: Back Up Symbian ka PC